Idolophu yaseHamilton eHideaway. Hamba yonke indawo.
I-Hamilton, i-Montana yidolophu encinane ehlala emthunzini weentaba ze-Bitterroot Saphire. Idolophu ephakathi kwedolophu endala enethiyetha, umculo ophilayo, imakethi enkulu yamafama eveki zonke kunye nokufikelela ngokulula kupakisho ezintabeni okanye ukonwabela umlambo okanye amachibi asekuhlaleni. IHamilton likhaya kwiDaly Mansion yeeKumkani zaseMontana. Ikufuphi neendawo ezininzi zokuhlala zasendle ezibandakanya iLee Metcalf Refuge edumileyo. Izikhokelo zifumaneka ngokulula ukukhwela amahashe, ukuloba iindiza, kunye nohambo lokudada.
Le yindlu encinci ye-classic enamathambo angaphezu kwekhulu leminyaka ubudala, kodwa yahlaziywa ngokupheleleyo kwiminyaka eyi-6 eyadlulayo. Kukho indawo yokuhlamba epheleleyo. Kunye nekhitshi eligcweleyo elivulekileyo. Inja yakho yamkelekile kodwa ndicela uyicoce. Kukho uhambo olude olujikelezayo olujikeleze ubumelwane olucetyiswa yilabradoodles yam. Uya kufumana iTV yescreen esicwebezelayo kunye neWiFi kunye nemfumba yeencwadi zomyeni wam endizithandayo. Ukuba uthanda ngokwenene ukufunda kwaye uthandane vele ugoduke. Uyakonwabela isizathu sokufumana okungakumbi.
Indlu yakho yokuzimela iphakathi kweebhloko zedolophu apho iivenkile, iivenkile zokutyela kunye neendawo zotywala zininzi. Kukho indawo yokupaka esitratweni. Kukho indawo encinci kodwa ekhuselekileyo ye-3ft yekhonkco yekhonkco kunye neyadi yangasemva. Iicawe, iibhari, kunye neendawo zokutyela zininzi, njengazo zonke iidolophu zaseMontana.
Mahala undithumelele umyalezo nangaliphi na ixesha phambi kwentsimbi yeshumi ebusuku. Ndihlala malunga neyure kodwa ndiqinisekile ukuba ndingakunceda ngayo yonke into emnxebeni. Ndiyayibulela kakhulu impendulo yakho kwinto oyithandayo kunye nento onqwenela ukuba ndiyitshintshe. Eli khaya yindawo yethu yeholide ke ngoko singathanda ukwabelana ngezinto ozifumeneyo.
Mahala undithumelele umyalezo nangaliphi na ixesha phambi kwentsimbi yeshumi ebusuku. Ndihlala malunga neyure kodwa ndiqinisekile ukuba ndingakunceda ngayo yonke into emnxebeni. Nd…